မော်ဒယ်စန္ဒရားပြုလုပ်သူများသည်, သစ်သားယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ယူမှုနမူနာ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / မော်ဒယ်စန္ဒရားပြုလုပ်သူများသည်, သစ်သားယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ယူမှုနမူနာ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized2မှတ်ချက်များ 818 views
Barista ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / လုပ်ငန်းများနှင့်တာဝန်ခံ Template ကို
ထုတ်လုပ်မှု, စီမံကိန်း, နှင့်လေ့လာရေးခရီးစာရေးယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့ Functions များ
ပစ္စည်းတိကျမော်ဒယ်များ Full-size ကိုအကွာအဝေးနှင့်သစ်သားစည်းဝေး. အခနျးန်ထမ်းများနှင့်သစ်သားမြှူကန်ထရိုက်တာများပါဝင်သည်.
လက်၌နေစဉ်အတွင်းဒီဇိုင်းများ၏တိုင်းတာနဲ့ကောက်ကြောင်းစစ်ကြော- စမ်းသပ်ခြင်းထုတ်ကုန်, အပြင်အဆင်အလုပ်သမားနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို.
ပန်းချီဆနျးစစျ, အသေးစိတ်အစီအစဉ်, သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ထားကျန်တာတွေ, နှင့်စတိုင်များနှင့်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများ Setup ၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစားသိရှိနိုင်ရန်မှဒီဇိုင်နာများနှင့်အတူတိုင်ပင်.
တည်ဆောက်သည်, ပွေးသှား, အပိုငျးပိုငျးဖွလျှော့ချရန်နှင့်ပုံဖော်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောဥပမာ bandsaws များအတွက်အဖြစ်အကယ်စင်စစ်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးပြုပြင်မွမ်းမံ, စိတျအပိုငျး, နှင့်စတိုင်များ, လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ.
မီးခြစ်, လုံခြုံစိတ်ချ, နှင့်ဗားရှင်းအပြုအမူဖွဲ့စည်းရန်စုပေါင်းကျွန်းသစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဆောက်လုပ်, သို့မဟုတ်အပိုငျးပိုငျးဝေမျှ, အလုပ်သမား Dowel, လက်သည်း, epoxy, သော့ခလောက်အဖြစ်စွဲစေ.
လေယာဉ်, ရိတ်, ပင်, နှင့်မျက်နှာပြင်များဖွဲ့စည်းရန်, နှင့်ကိုလျော့ချ, စံချိန်, သန့်ရှင်းသော, နှင့်သဲစတိုင်များအထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်းများနားလည်သဘောပေါက်ရန်, လက်-tools တွေသုံးပြီး.
ကျွန်းသစ်ကြောင်းစတော့ရှယ်ယာကိုရွေးချယ်ပါ, စတိုင်များသိရှိနိုင်ရန်, စတော့ရှယ်ယာအပေါ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် tag ကိုအပြင်အဆင်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့် scribers သကဲ့သို့တိကျကိရိယာများအသုံးချဖို့, ကဏ္ဍများ, နှင့် protractors.
သစ်သားစတိုင်များတည်ဆောက်, အပြုအမူ, themes များ, အပြည့်အဝကြောင်းစကေးလှောင်ပြောင်-ups, နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအရင်းအမြစ်များနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ဒြပ်စင်နှင့်ပတ်သက်သည့်မှို.
အပြုအမူအပေါ်မာကုအဆုံးအဖြတ်အချက်အလက်, အစိတ်အပိုင်းများ, နှင့်တင်းပလိတ်များအထူးသနှင့်အဝေးနည်းလမ်းများညွှန်ပြရန်.
ချဉ်းကပ်နည်း, ပစ္စည်း collection များကိုဆွဲဆောင်, နှင့်တည်ဆောက်, ပုဒ်မဒီဇိုင်းများ, ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝစကေးလှောင်ပြောင် ups.
ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအပြင်အဆင်သို့မဟုတ်ခြစ်များအတွက်အဖြစ် function ကိုအကူအညီအထောက်အပံ့များကိုလီဆယ်.
ရည်ညွှန်းထားနမူနာအားဖြင့်နှင့် ပတ်သက်. မှတ်တမ်းတင်ထားသောဖြစ်ပါတယ်.
သေတ္တာခါ၏အပို-ကြီးမားသောသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်အမျိုးအစားများကိုစီစဉ်နှင့် ပတ်သက်. လက်စွဲအဖြစ်အသုံးပြုသွားမည်နိုင် jigs တည်ဆောက်.
ဒိုင်းကာသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော shellac အဖြစ်ဆွဲဆောင်မှုလုံးဝနှင့်အတူအမျိုးအစားများသို့မဟုတ်အပြုအမူပြီးစီး, ယွန်း.
Reading နားလညျမှု-နားလညျမှုဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းအလုပ်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်စာပိုဒ်တိုများနှင့်စာကြောင်း created.
လက်ရှိပြောနေကြသည်အခွားအဘယျရှေးရှေးမှမြေတပြင်လုံးအာရုံစူးစိုက်မှုတက်ကြွ-နားထောင်ခြင်း-တင်ပြ, ထုတ်လုပ်လျက်ရှိအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်ကို အသုံးပြု., သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးခွန်းများကိုတောင်းဆို, အစားမှားယွင်းတဲ့အခါသမယမှာ mesmerizing ထက်.
Criticalthinking-အလုပ်သမားယုတ္တိဗေဒနှင့်အားနည်းချက်များကိုနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာ options များ၏အားသာချက်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့စဉ်းစား, အခက်အခဲများမှကောက်ချက်သို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
သင်ယူခြင်းနည်းလမ်းများ-Pick နှင့်လတ်ဆတ်သောအရာတို့ကိုလေ့လာနေသို့မဟုတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးသည့်အခါပြဿနာများအတွက်သင့်လျော်သော instructionPERtutorial မဟာဗျူဟာများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအသုံးချဖို့.
အခြားလူများ၏စောင့်ကြည့်မှု-TrackingORDiscovering ထိရောက်မှု, မိမိကိုယ်ကို, သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများကုစားခြေလှမ်းများယူသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုထုတ်လုပ်ဖို့.
လူမှုသူတို့ကျင့်သောကြောင့်သူတို့ပြုမူအဘယ်ကြောင့် othersI တုံ့ပြန်မှုသတိထားအမြင်-ဖြစ်ခြင်းနှင့်နားလည်မှု.
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. control-မွမ်းမံလုပ်ရပ်များ’ အပြုအမူ.
Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-positive ကလူကို enable မဟာဗျူဟာရှာဖွေနေ.
installation-Installing မော်ဒယ်များ, ဂီယာ, ဝါယာကြိုးများ, အင်ျဂါရကျေနပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် applications များ.
အတော်ကြာအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း programming-ထုတ်ဝေကွန်ပျူတာ applications များ.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-ကိုကြည့်ရှုခြင်း gauge, ဘူးသီး, သို့မဟုတ်နောက်ထပ်ညွှန်းကိန်းကိရိယာစနစ်တကျလည်ပတ်နေသည်သေချာစေရန်.
tools တွေအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခါပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုလိုအပ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကြောင်းကို Maintenance-ဖျော်ဖြေဝန်ဆောင်မှုအ.
လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချဖို့ Mende-Restoring နည်းစနစ်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးကုန်စည်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စာမေးပွဲဖြေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-ပွုလုပျခွငျး, ပံ့ပိုးပေး, အရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်ထိရောက်မှုကိုတရားစီရင်ခြင်းငှါသို့မဟုတ်နည်းစနစ်.
စနစ်များ setting ကိုပြောင်းလဲလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်မည်သို့သင့်ပါတယ်စနစ်၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုသုံးသပ်ခြင်း-ကိုစူးစမ်း, လုပျထုံးလုပျနညျး, လည်းအခွအေနရလဒ်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဦးမည်.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချိန် oneis အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု-ကိုင်တွယ်ခြင်း.
ငွေသားများမကြာမီအလုပ်ပြီးစီးခဲ့ရှိသည်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါလိမ့်မည်ဘယ်လောက်ငွေ-ကိုစူးစမ်း၏စစ်ဆင်ရေး, နှင့်စာရင်းအင်းသည်ဤကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်..
ပစ္စည်းနည်းလမ်းများ-ရယူနှင့်ပစ္စည်းများ၏စံပြအသုံးပြုမှုကိုမှကြည့်ရှု၏ကြီးကြပ်မှု, အဆောက်အ, နှင့်သတ်မှတ်ထားသောပါဘူးဖို့လိုအပျထုတ်ကုန်လည်ပတ်.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-Creating လှုံ့ဆော်၏အုပ်ချုပ်ရေး, သူတို့လုပ်ကိုင်သောကွောငျ့ရှေးရှေးညွှန်ပြ, အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရှေးရှေးအဆုံးအဖြတ်.
အကြီးတန်း High School တွင်ဘွဲ့ (GED သို့မဟုတ်အကြီးတန်းကျောင်းနှင့်ညီမျှစာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်)
တစ်ဦး High School တွင်အဆင့်ထက်သိသိသာသာလျော့နည်း
ထက်ပိုပြီး 1 ခုနှစ်, သလောက် 24 လနှင့်အပါအဝင်
အောင်မြင်မှုများ / ကြိုးစားခြင်း – 89.25%
ဇွဲ – 93.40%
Initiative – 88.53%
ထိန်းချုပ်ရေး – 84.94%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 90.65%
အခြားသူများများအတွက်ပြဿနာ – 84.94%
ယဉ်ကျေးမှု Alignment – 78.25%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 91.09%
စိတ်ဖိစီးမှုစာနာထောက်ထားရေး – 89.02%
ဘက်စုံ / ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် – 90.72%
ယုံကြည်စိတ်ချ – 94.55%
Depth ၏အသိအမြင် – 95.78%
ယုံကြည်စိတ်ချရသော – 87.50%
လွတ်လပ်ရေး – 84.10%
တိုးတက်ရေး – 89.06%
analytical အတွေးအခေါ် – 89.66%
တယ်လီဖုန်းလုပ်ငန်းရှင်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ Duty နမူနာ
အက္ခရာစဉ်ကိုရယူသုံးခြင်းဖြင့်သတင်းအချက်အလက် Give, ပထဝီ, သို့မဟုတ်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ. သီးသန့်ငွေတောင်းခံမှုလိုအပ်ချက်များကိုသုံးပြီးဝယ်လက် Assist. …
Pingback:5Powerful Answers To Tough Interview Questions